Better Salesman: Grow Your Revenues (ထိပ်တန်းအရောင်းသမားဖြစ်ဖို့) - Better Version
May 18, 2020 2021-10-28 21:24
ရောင်းအားကောင်း ရလာဒ်ကောင်းတဲ့ အရောင်းသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ လူတိုင်း ရောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ မကင်းပါဘူး။ ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက် တခုခုတော့ ရောင်းနေရတာပါဘဲ။
ဝယ်သူတွေ၊ ဖောက်သည်တွေက မယူသေးဘူး၊ မဝယ်သေးဘူး၊ နောက်မှ ပြန်လာခဲ့ပါ။ ဈေးများတယ်နော်၊ စဖြင့် ပြောရတာမျိုးတွေခံရဖူးလား။
ဝယ်သူက ကိုယ့်ပစ္စည်းလဲ ကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အရောင်းအဝယ် မဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေ ဖြစ်ဖူးလား။
ကိုယ့်အခုလေးတင် အဆင်ပြေပြေရောင်းခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းကို အရင်ဝယ်သူကိုရောင်းခဲ့သလိုဘဲ ရောင်းပေမယ့် နောက်ဝယ်သူဆီလဲ ရောက်ရော ဘယ်လိုမှ ရောင်းမရတော့တာမျိုးတွေကော ဖြစ်ဖူးလား။
ကိုယ့်ရောင်းကုန်ကို ဝယ်သူ ခနတွင်းမှာဘဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြနိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ တွေးဖူးလား။
ကိုယ်နဲ့ အတူလုပ်နေတဲ့ အရောင်းသမားချင်းကို တခြားတစ်ယောက်က အရောင်းတွေပိုရ နေတာမျိုးတွေ တွေ့ဘူးလား။
ဒါက အရောင်းသမားတိုင်း၊ ရောင်းချခြင်းနဲ့ မကင်းတဲ့ လူတိုင်း ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ပြသနာတစ်ချို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အခက်အခဲတွေကို အကောင်းဆုံး ဖြတ်ကျော်နိုင်ပြီး ရလာဒ်ကောင်းတဲ့ ထိပ်တန်းအရောင်းသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Skills တွေ၊ ဗဟုသုတတွေ၊ လက်တွေ့ အသုံးချ နည်းလမ်းများကို တစ်နေရာတည်းမှာ လေ့လာနိုင်ဖို့ အတွက် Better Version မှ ဖွင့်မယ့် Better Salesman: Grow Your Revenue အွန်လိုင်း သင်တန်းတက်ပါ။
ရောင်းချခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူတိုင်း၊ အထူးသဖြင့် အရောင်းသမားများအနေနဲ့ Professional လုပ်နေကြတဲ့ လူတိုင်း တက်သင့်ပါတယ်။
ဒီသင်တန်းမှာ ဘာတွေသိသွားမလဲ / ဘာတွေရသွားမလဲ/ ဘယ်လိုရလဒ်ကောင်းတွေထွက်နိုင်မလဲ။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အရောင်းသမားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
ဝယ်သူတွေကို ကိုယ့်ရောင်းကုန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Heart ထိအောင် ဘယ်လိုပြောမလဲ။
တွန်းရောင်းစရာမလိုဘဲ ဝယ်သူတွေကိုယ်တိုင် ဝယ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့ မေးခွန်းမေးနည်းများ
မတူကွဲပြားတဲ့ ဝယ်သူအမျိုးအစားပေါ်မှာ မူတည်ပြီးပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်မယ့် ဗျူဟာတွေ
အငြင်းခံရတဲ့အခါ အကောင်းဆုံး ရလာဒ်ရအောင် ဘယ်လို ကျော်လွှားမလဲ။
အထိရောက်ဆုံး အရောင်းပိတ်ဖို့ သဘောတူညီမှုရယူနိုင်ဖို့ လက်တွေ့ အသုံးချ နည်းလမ်းများ။
ဝယ်သူများနဲ့ ရေရှည် ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ခြင်းများ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းအပ်ရန် မက်ဆေ့မှ တစ်ဆင့် မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
သင်ခန်းစာ Video တွေလေ့လာတဲ့အခါ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် အကြံပြုချက်များ
Instructions – သင်တန်းမှာ ထိထိရောက်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ပါ။
Module 1: Selling Function &7Steps Of Selling Process
ဒီ module မှာဆိုရင် အရောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိထားရမယ့် ဥပဒေသတွေ၊ စနစ်တွေကို ပို့ချသွားမှာပါ။
သင်အခု တက်ရောက်နေတဲ့ သင်တန်းကို ဘယ်လို စီစဥ်သလဲ။
Selling Functions and Types Of Salesman (အရောင်းသမား အမျိုးအစားများ)
Ethical Selling (ကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီ ရောင်းချခြင်း)
Mistakes Of The Salesmen (အရောင်းသမားတွေ ဘာတွေမှားလေ့ရှိကြလဲ။)
What Better Version Can Do For You
7 Steps Of Selling Process (ရောင်းချခြင်း အဆင့်များ)
5 Types Of Salesman Positions (အရောင်းသမားပုံစံ ၅ မျိုး)
Quiz I (ဓမ္မဓိဌာန်)
BSM - Resources
သင်တန်းမှာ လိုအပ်တဲ့ Files တွေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ လိုအပ်မယ်ထင်ရင် Print ထုတ်ပြီး သင်ခန်းစာတွေ ကြည့်ရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင် မှတ်စုရေးတာမျိုး လုပ်ခြင်းကလဲ အရမ်းထိရောက်ပါတယ်။
BSM Modules – pdf
Module 3: Personality Type Tool
Module 2: Listening and Communicating To The Heart Of The Customers (နားထောင်ခြင်း၊ ဝယ်သူများ Heart ထိအောင် ဘယ်လို တင်ပြပြောဆိုမလဲ။)
Communication ကတော့ အရောင်းသမားတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအကျဆုံး skill တစ်ခုပါ၊ ဒီ အကြောင်းတွေကို ဒီ module3မှာ ရှင်းပြသွားပါမယ်
What is Communication? (Communication ဆိုတာ ဘာလဲ?)
Mistakes of Listening (ဝယ်သူတွေရဲ့ စကားသံတွေကို နားထောင်ရာမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အမှားများ)
Art of Listening (ဂရုတစိုက် နားထောင်ခြင်း အနုပညာ)
Why do People Buy and How can You Position Yourself? (လူတွေ ဘာလို့ ဝယ်ကြတာလဲ ဘာလိုချင်လို့လဲ?)
FAB Selling Techniques (ဝယ်သူများကို အထိရောက်ဆုံး ပြောဆို တင်ပြရောင်းချခြင်း)
Understanding Customer Criteria (ဝယ်သူတွေရဲ့ ပုံစံကို သိရှိ နားလည်ခြင်း)
Sales Pitch (အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ထိထိရောက်ရောက် မိတ်ဆက်ခြင်း)
Quiz II (ဓမ္မဓိဌာန်)
Better Version မှ သင်တန်းများရဲ့ အရည်အသွေးများ မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် Half_Class Feedback Form လေးကိုဖြည့်ပေးပါဦးနော်။
Module 3: Personality Types (ပုံစံမတူတဲ့ လူတွေပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲ ရောင်းချခြင်း)
လူအမျိုးအစားတွေ အကြောင်းနဲ့ ဘယ်လိုလူကို ဘယ်လိုမျိုး ရောင်းရမလဲ သိဖို့အတွက် ဒီ module3ကို အဆုံးထိသေချာလေ့လာပါ
Why Personality Types &4Kinds Of Personality
The Driver’s Personality Behavior and How to sell them (Driver Personality ရဲ့ အမူအကျင့်များ နဲ့ ဘယ်လိုရောင်းမလဲ။)
The Analytic’s Behavior and How to sell them (Analytic Personality ရဲ့ အမူအကျင့်များ နဲ့ ဘယ်လိုရောင်းမလဲ။)
The Amiable’s Behavior and How to sell them (Amiable Personality ရဲ့ အမူအကျင့်များ နဲ့ ဘယ်လိုရောင်းမလဲ။)
The Expressive’s Behavior and How to sell them (Expressive Personality ရဲ့ အမူအကျင့်များ နဲ့ ဘယ်လိုရောင်းမလဲ။)
Which personality is the best? (ဘယ်လို Personality က အကောင်းဆုံးလဲ။)
As A Top Salesman (ထိပ်တန်းအရောင်းသမားတစ်ယောက် အနေနဲ့ဆိုရင်…)
Quiz III (ဓမ္မဓိဌာန်)
Module 4: Overcoming Objections & Sales Closing Techniques (ငြင်းဆန်မှုများကို ကျော်လွှာခြင်း နှင့် အရောင်းပိတ်ခြင်း၊ သဘောတူညီမှု ရယူခြင်း နည်းလမ်းများ)
အငြင်းခံရတယ်ဆိုတာ အရောင်းသမားတိုင်း ကြုံတွေ့ရမယ့် အရာတစ်ခုပါ၊ အငြင်းမခံရအောင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုမလဲဆိုတာ ဒီသင်ခန်းစာမှာ ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ ဒါအပြင် အရောင်းသမားတိုင်းတတ်ထားသင့်တဲ့ အရောင်းပိတ်နည်းလမ်းများ၊ ရောင်းအားတက်လာစေမယ့် နည်းလမ်းများကို လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Why do people object? (ဘာကြောင့် ငြင်းခံရတာလဲ)
5 types of Objection (အငြင်းခံရတဲ့ အကြောင်းရင်း ၅ ခု)
APAC Handling Objection Techniques (ငြင်းခံရလာတဲ့အခါ ဖြတ်ကျော်ရမယ့်နည်းလမ်း)
How to reduce Rejection Rate (ဝယ်သူဆီက အငြင်းခံရတဲ့နှုန်းနည်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။)
Better Sales Mastery – Why and What? (အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့)
9 Effective Sales Closing Techniques (ထိရောက်တဲ့ အရောင်းပိတ်နည်း ၉ နည်း)
2 Ways to Increase Your Sales Volume (ရောင်းအားတက်စေမယ့် နည်းလမ်း ၂ မျိုး)
Quiz IV (ဓမ္မဓိဌာန်)
Module 5: OPEN Questions Selling (မေးခွန်းမေးမြန်းရင်း ရောင်းချခြင်းနည်းလမ်းများ)
ဝယ်သူတွေရဲ့ သဘောထားကို သိဖို့ မေးခွန်းများများမေးပါ။ ဒီ modules မှာတော့ မေးခွန်းမေးမြန်းပြီး ရောင်းချခြင်းအကြောင်း အသေးစိတ် ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
Why is Questioning important? (ဘာလို့ မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းက အရေးပါတာလဲ)
Rapport Building with customers (ဝယ်သူများနှင့် ရင်းနှီးမှု တည်ဆောက်ခြင်း)
Types of Questions (မေးခွန်းအမျိုးစားများ)
OPEN Questions Selling Techniques (မေးခွန်းများမေးမြန်းပြီး ရောင်းချခြင်း)
OPEN Questions Selling Techniques – Most Asked Questions
Quiz V (ဓမ္မဓိဌာန်)
Better Salesman အတန်းတက်ရောက်ပြီးသူများအတွက်...
Wah Wah Lwin
ဒီသင်တန်းကနေ အရင်မသိသေးတဲ့ Knowledge၊ အမှားမှန်းမသိဘဲ လုပ်မိနေတဲ့ အမှားတွေကို ပြန်ပြီး မြင်လာစေတယ်။ သင်ယူလေ့လာခွင့်ရတဲ့ သင်တန်းကောင်းတစ်ခုပါပဲရှင့်
Enrolled	985 students